यस्तो मन्दिर जहाँ मूर्ति बोल्छ, बैज्ञानिक भए हैरान -
मन्दिरमा केही न कही अनौठो शक्ति रहेको बैज्ञानिकहरु बताउँछन् । उनीहरु पनि यो विषयलाई लिएर हैरान बनेका छन् । यो मन्दिरको स्थापना करिब ४ सय बर्ष पहिले भएको थियो । यो मन्दिरमा कलश स्थापनाको नियम छैन । तन्त्र साधना यहाँ पुजा गरिन्छ । तान्त्रिक कारणले यहाँ कलश स्थापना गरिँदैन ।
Previous ग्यास्ट्रिक र अल्सरबारे यी कुरा जानौं, के खाने–के नखाने?
Next कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ? थाहा पाउनुहोस्